Muwaadin maalintii saddexaad magaalada Berbera ugu xidhan Maayarka Berbera | Somaliland.Org
Muwaadin maalintii saddexaad magaalada Berbera ugu xidhan Maayarka Berbera
May 29, 2010	Berbera (Somaliland.Org)- Muwaadin 60 jir ah oo haysta dhalashada wadanka Kanada ayaa lagu xidhay jeelka wayn ee magaalada Berbera, halkaasi oo uu ku jiro muddo 3 maalmood ah iyada oo aan lagu qaban waaran-maxakamadeed, balse lagu xidhay dalab ka yimi Maayarka Berbera oo ah Gudoomiyaha guddida nabadgelyada gobolka Saaxil.
Muwaadinkan oo magaciisa la yidhaahdo Ibraahin Xaaji Cabdi Cilmi, ayaa laga dayrinayaa xaaladiisa caafimaad, maadaama lagu jiro wakhtigii Xagaaga oo ay kulushahay cimilada magaaladaasi, isla-markaana aanu lahayn qaboojiyeyaal jeelka uu ku xidhan yahay, waxaana lagu qiyaasay heer kulka wakhtigan ee magaalada Berbera 40 degree Xagaaga Sanadkan, wararku waxay intaasi ku darayaan in lala soo xidhay laba ruux oo kale, iyada oo la sheegay in qaab khiyaamo ku jirto loo maray qabashadiisa. “Waxa loogu yeedhay hab-casuumadeed markii looga yeedhay Laasa-dawaco oo ah deegaan u dhow Berbera oo ninkani ku lahaa Beer wayn, markii uu yimi xafiiska Maayarka oo ay ehel yihiina waxa amray in la xidho Maayarka isaga iyo laba qof oo kale.” Sidaas waxa yidhi mid ka mid ah dadkii goob-joogayaasha ka ahaa dhacdada lagu xidhay muwaadinkan.
Waxa kale oo ay sheegayaan wararka aanu ka helay gobolka Saaxil in muwaadinkan loo xidhay hadalo-siyaasadeed oo ka soo baxay, kuwaasoo laga dhadhansaday taageero uu u hayo wakhtigan lagu jiro kala-guurka siyaasadeed xisbiga mucaaradka ah ee Kulmiye, dadka ku nool deegaankaasi ayaa dedaal dheer ugu jira sidii loo sii dayn lahaa muwaadinkan wax ku soo bartay wadanka USA oo ah kornayl hawl-gab ah.
Ugu dambayntii waxaanu isku daynay in aanu la xidhiidhno Maayarka Berbera si aanu wax uga waydiino xadhiga muwaadinkan, hase yeeshee noo may suurto gelin.
Dhinaca kale, Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE ayaa cambaareeyay Xadhigga Muwaadinkan, waxaanay ku baaqeen in la sii daayo. “Qof muwaadin Somaliland ah in xoriyadiisa laga qaado, Xisbi KUlMIYE ahaan waanu ka soo hor jeednaa, markii u horaysayna maaha ee dad badan ayaa jira oo inta la qabtay maxkamad la keenin, nin dambi gaystay maaha Ibraahin Xaaji Cabdi Cilmi, wuxuu ka mid yahay kuwaa lagu qabanayo sharci darada ee muwaadiniinta ah ee aan waxba galabsan, xukumada maanta joogtaana ka waantoobi mayso in qof iyada aan la hubin tuhun lagu xidho, lagu qabto, lagu ciqaabo.” Sidaa waxa yidhi Xoghayaha Guud ee Xisbiga Kulmiye oo ka hadlay sida uu u arko Xisbigiisu xadhiga muwaadin Ibraahim, isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu intaasi ku daray oo yidhi; “waxaanu leenahay ha la sii daayo muwaadinkaasi xoriyadiisa si madaxbanaan, hadii la tuhmayo maxkamad gobol iyo mid degmo midna sharci maaha, gudiyada nabadgelyada ee ina Rayaale sameeyay maaha sharci, waxaan aaminsanahay hadii wax lagu hayo maxkamada sharciga ha la keeno hadii kale ha loo soo celiyo xoriyadiisa. Waxaan ku celinayaa ha ka waantawdo xukuumada Somaliland dadka ay ku xidhayaan magaca kulmiye ee ku xidhayaan tacadiga ugu gaytsanayaan.” Ayuu ku soo gebo-gabeeyay hadalkiisa Xoghayaha Guud ee Xisbiga Kulmiye Md. Keyse Xasan Cige.
Previous PostGuddoomiyaha Golaha Guurtida oo ka hadlay Doorashada Madaxtooyada iyo xaalada bariga dalkaNext PostTaageerayaal cusub oo ku biiray KULMIYE iyo khudbadihii masuuliyiinta iyo Hoggaanka Xisbiga	Blog